Kusukela onjalo okukhona amnandi, okumnandi futhi elanga njengalena pancake, akenqabi ubani. Njalo wekhaya igcina iresiphi wakhe siqu kule isidlo, okwenza pancake okukhethekile futhi eyingqayizivele. Uma ngempela uhlose kusimangaze obathandayo, ungakwazi hlomela them pancake nge banana, ngoba lolu hlobo ukugcwaliswa akuyona neze into isiko kwezihlalo yethu. Ake sihlolisise ngalesi isidlo.
Ukuze silungiselele lokhu dish udzinga imikhiqizo: Ubisi - 320 ml, iqanda elilodwa, a banana, 30 amagremu ibhotela sashintsha spoonfuls ezimbili ushukela, inkomishi kwesigamu ufulawa, usawoti kancane kakhulu, ezimbili nezinkezo se-baking powder kuze esivivinyweni.
Uma uye walungisa kakade zonke izithako, ungaqala lokho ukupheka pancake nge banana. Isinyathelo sokuqala ukuba bakhuthaze mafutha ushukela, usawoti kanye namaqanda. Bahlanganise ehlutshiwe banana puree, enezele ingxube lelungiselelwe. Manje ungakwazi ukwengeza kuya ubisi inhlama, ufulawa, baking powder for inhlama ke uxove konke kahle kuze abushelelezi. pan Dry kufanele ukufuthelana, bese ngosizo isipuni ukusakaza inhlama kuso, ukuzama ukwenza pancake round ukuma. Fry pancake kunesidingo kuze segolide nhlangothi zombili. Lokhu dish kungenziwa ngakhonza neqembu Ubisi olujiyile, ukhilimu omuncu noma berry sauce.
Ungakwazi ukupheka pancake nge banana ukugcwaliswa. Inqubo kulungiselelwa isidlo uzobe kuchazwe. Kuyinto kudingekile ukuhlala ngokuhlukana isikhuphasha kusukela amaprotheni bese isiswebhu amaprotheni. Manje kubalulekile isitsha ahlukene uhlanganise ufulawa, amaqanda izikhupha, ubisi, usawoti, futhi ishq kakhukhunathi uzilungiselele amaprotheni ke inhlama kufanele sokunika imizuzu eyishumi nanhlanu. Epanini kumelwe chaza ibhotela inhlama Bhaka eyatholakala kusukela ezine Pancake usayizi isilinganiso. Manje ungenza ukugcwalisa for pancake yethu. Ubhanana udinga ikhasi, usike lengthwise zibe izingxenye ezimbili. Sauté nabo ibhotela nge kakhukhunathi. Beka ngamunye wathola isigamu pancake banana lamantongomane kancane. Roll up futhi uvikelekile ku nabo asikiweko. Kulesi isidlo ilungele ukudla. Khonza kubo can kokubili ukushisa nokubanda, inganikeza umugqa ujamu amnandi noma nososo.
pancake Thai nge banana
Noma ubani oke waba owake eThailand futhi banambitha pancake zabo okumnandi nge banana, wafuna ukupheka okufanayo ekhaya. Futhi kulabo abangenzanga ngizilinge, ungakwazi ukunikeza ukupheka ngokwakho, futhi uzizwa charm lokhu dish. Ukuze ukulungiselela yabo kuyadingeka: yikhulu namamililitha of lukakhukhunathi esilinganayo amanzi, amaqanda amathathu, nengxenye-spoon usawoti, ezintathu izinkomishi ufulawa, ubhanana izicucu Pancake, futhi chocolate sauce Ubisi olujiyile.
Asihambe ngqo ukulungiselela. Kuyadingeka ukuba uhlanganise amanzi futhi le lukakhukhunathi ubebushelezi, engeza usawoti, futhi manje ukwethula ufulawa izingxenyana ezincane, vymeshivaya ngokucophelela. Inhlama kumele abe emaweni njengasezinsukwini amadombolo. Kufanele-ke kube zihambisana epulasitikini bese ushiye ihora elilodwa phezu kwetafula. Khona-ke kudingeka kuhlanzwe ubhanana, usike wabayisa tincetu. Inhlama ikhishwa ngokushesha ngangokunokwenzeka Pancake ohlabayo ububanzi kufanele kube pan inkudlwana. On the pan ukuthosa kuyadingeka ukuze shisisa amafutha kancane, bese ukubeka inhlama kuso. Inhlama gcoba Iqanda ashaywe, futhi ke wagqoka banana bakhe imibuthano. wena emaphethelweni Pancake kumelwe ibe imvilophi. Fry it nhlangothi zombili kuze umbala enhle segolide. Okunye Inhlama ibhalwe ngendlela efanayo. Ungabese ukubeka pancake ngoqwembe, ufafaze nabo ushokoledi sauce noma ubisi olujiyile. Khonza etafuleni, uthathe yizicucu a la Carte. Ngakho-ke kuvela pancake nge banana kanye ushokoledi.
Ilayisi iphalishi e multivarka - esihlwabusayo futhi unempilo!
Indlela okumnandi futhi esheshayo ukubhaka amazambane multivarka
"Mriya" AN-225. Ukubuyekeza, Ukucaciswa, izithombe. ukushayela izindiza zokuthutha impahla esindayo